तिथि मेरो पत्रु » के तपाईं लजालु हुनुहुन्छ भने महिला दृष्टिकोण कसरी?
तपाईं एक लजालु मान्छे हो र तिम्रो दोष यी सबै वर्ष अविवाहित रहने तपाईं बाध्य छ.
माथि कथन आफ्नो अवस्था वर्णन गर्छ? तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ सजिलो--कार्यान्वयन गर्न, तर प्रभावकारी तरिकामा समस्या छुटकारा पाउन? यदि हो, छलफल तल तपाईं मदत गर्नुपर्छ.
लजाउने बानी हटाउन, तपाईं विश्वास प्राप्त गर्न मदत गर्न सक्छ तपाईं आफैलाई विश्वास र धेरै कारक को एक परिणति छ हुनेछ. तपाईं गर्नुपर्छ ठीक कुरा जान्न मा पढ्नुहोस्.
यो एक तिनको उपस्थिति परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा साँचो हो. फलस्वरूप, एक मानिसले कस्तो देखिन्छ आकर्षक बारेमा केही गर्न सक्दैनन्, तर पक्कै केही कुराहरू अधिक विश्वस्त हेर्न गर्न सक्छन्.
यो तपाईं आफ्नो लजाउने को कुनै पनि महिला दृष्टिकोण गर्न नसकेर हो कि हामी बुझ्न सक्छौं छ, तर तपाईं पनि बुझ्न आवश्यक छ एउटा कुरा तपाईं भन्दा कुनै एक अरू अन्य छ (र तपाईं शायद केहि मान्छे धेरै नजिक) के तपाईं लजालु छन् भनी थाह.
त्यसैले, तपाईं सजिलै उनलाई तपाईं ती सुरक्षित मध्ये एक हो भनेर बुझ्न दिँदै बिना मान्छे संग आपस प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ (लजालु पढ्न) सधैं बालिका टाढा बसेका मानिसहरू. यो सजिलो तपाईं आफ्नो शालीनता लुकाउने लागि बनाउन हुनेछ; तपाईं सफलतापूर्वक यस आवरण-अप प्रदर्शन गर्न व्यवस्थापन पटक, तपाईं स्वतः बढी विश्वस्त महसूस शुरू हुनेछ.
विश्वस्त हेर्न तपाईंले लुगा लगाउँछु बाटो मा एक बिट ध्यान पर्छ. तपाईं भीड मा बाहिर खडा गर्न अनुमति छैन कि लगाएका लुगा जोगिने. के छैन, तपाईं भीड देख्न ती फ्लोरोसेन्ट ट्राउजर र उज्ज्वल रंग शर्ट लगाउने आवश्यकता छैन. बस एक बिट समझदारी आफ्नो लुगा चयन; के तपाईं असल हेर्नु लुगा लगाउने भने, तपाईं स्वतः तपाईं महिलाहरु को ध्यान समातेर हुनेछ.
व्यावहारिक लक्ष्यहरू छ
तपाईं सबै भन्दा लोकप्रिय चारै र सबै भन्दा आकर्षक केटी woo गर्ने योजना छ? एक लजालु मानिसको रूपमा, तपाईं कठिन हुँदैन.
यो तपाईंलाई अधिक विश्वस्त हेर्न सुरु पटक आफ्नो लजाउने एकदम कम हुन्छ भन्ने कुरा साँचो हो, तर तपाईं आसपास भन्दा केटी लोभ्याउन गर्न पर्याप्त स्मार्ट भएका छन् भन्ने होइन.
पहिले देखि नै लोकप्रिय छ र उनको समूह सबैभन्दा आकर्षक एक भएकोमा जानिन्छ कुनै केटी सामान्यतया अत्यन्तै विश्वस्त छ. तपाईं धेरै हालै भेला विश्वस्त यस्तो केटी दृष्टिकोण पर्याप्त छैन; तिनको भरोसा तपाइँको तपाईं उनको दृष्टिकोण छौँ क्षण भंग गर्नेछ.
त्यसैले, आफ्नो उद्देश्य आफ्नो स्तर मिल्दो केटी पा गर्नुपर्छ; सधैं तपाईं थरथर महिलाहरु छ कि आउँदै जोगिन.
आँखा सम्पर्क बनाउन देखि नहिचकिचाउनुहोस्
तिमी अन्त कसैले दृष्टिकोण जब, आँखा सम्पर्क बनाउन देखि नहिचकिचाउनुहोस्. एक मानिस कुनै अवरोध बिना आफ्नो आँखा मा देखिन्छ जब महिला सजिलै wooed मिल.
यो छ, तथापि, शायद सबै भन्दा गाह्रो काम एक लजालु मानिसले कहिल्यै गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ; तर, पहिलो बाधा i.e एक पटक. स्त्रीको तपाईं अर्को पार गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्नु हुनेछ पार जान.
आँखा सम्पर्क बनाउने तपाईं वास्तवमा ग्रहण गर्दै छन् के भन्दा धेरै सजिलो छ. आँखा सम्पर्क गरिसकेपछि, केही मिनेट लागि यो कायम गर्न प्रयास; आफ्नो प्रारम्भिक अलि-अलि डराउनु पक्कै रहनेछैन.
माथिको सुझाव लजाउने को खोल बाहिर आउन मदत गर्नुपर्छ. यी सुझाव निम्न भन्दा अन्य, तपाईं पनि आफ्नो कुराकानीको क्षमता बढाउन र हास्य भाव brushing मा काम गर्न सक्छन्.